dendi – Gaming Noodle
Na’Vi မှာ အသင်းဖော်ဟောင်းဖြစ်ခဲ့သူ Dendi ကို ဝေဖန်လိုက်တဲ့ XBOCT Na’Vi အသင်းဟာ Dota2လောကမှာ တစ်ခေတ်တစ်ခါက ပြိုင်စံရှားအသင်းကြီးတစ်သင်းအဖြစ် လွန်စွာထွန်းတောက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ Na’Vi အသင်း TI1 ကို အနိုင်ရရှိခဲ့စဉ်က mid lane ကစားသမားဟာ လက်ရှိ B8 အသင်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ Dendi ဖြစ်ပြီး carry ကစားသမားကတော့ XBOCT ပါ။ မကြာသေးမီက HellRaisers Dota2နဲ့ အင်တာဗျူးတစ်ခုအတွင်းမှာ XBOCT ဟာ အသင်းဖော်ဟောင်း ဖြစ်သူ Dendi အပေါ် ဝေဖန်မှုများကို ပြုလုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ XBOCT ပြောကြားချက်များထဲမှာတော့ Dendi ရဲ့ တစ်ချိန်က ဂုဏ်သိက္ခာမြင့်မားတဲ့ပုံရိပ်ဟာ ယခုအချိန်မှာ သူ့ရဲ့လုပ်ရပ်များကြောင့် …
Na’Vi မှာ အသင်းဖော်ဟောင်းဖြစ်ခဲ့သူ Dendi ကို ဝေဖန်လိုက်တဲ့ XBOCT Read More »
[Unicode] ရှုံးပွဲ (၁၁) ပွဲအထိ ဆက်လာနေတဲ့ Dendi ရဲ့ B8 အသင်း ယခုနှစ်အစောပိုင်းကမှ စတင်ဖွဲ့စည်းထားခဲ့တဲ့ Dendi ရဲ့ B8 အသင်းဟာ လက်ရှိ Dota2ပြိုင်ပွဲများ အတွင်းမှာ ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေများကို ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ စတင်ဖွဲ့စည်းချိန်ထဲက ယခုအချိန်ထိ အသင်းသားတစ်ဦးသာ အပြောင်းအလဲလုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ B8 အသင်းရဲ့ လက်ရှိကစားသမားစာရင်းကတော့ Excalibur, Dendi, Ghostik, KingR နဲ့ LeBronDota တို့ပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။ B8 အသင်းအပြောင်းအလဲလုပ်ခဲ့တာကတော့ ယခင်က ကစားသမားဟောင်း pio65 နေရာမှာ Excalibur ကို ထည့်သွင်းလိုက်တာပါ။ ဒါပေမယ့် မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ယင်းအပြောင်းအလဲဟာ အသင်းရဲ့ အခြေအနေကို …
ရှုံးပွဲ (၁၁) ပွဲအထိ ဆက်လာနေတဲ့ Dendi ရဲ့ B8 အသင်း Read More »
[Unicode] ဒုတိယအသင်းတွေ ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ Virtus Pro နဲ့ Dendi ရဲ့ B8 CIS အသင်း ၂ သင်းဖြစ်တဲ့ Virtus Pro နဲ့ Dendi ရဲ့ B8 တို့ဟာ ဧပြီလ (၁) ရက်နေ့က သူတို့ရဲ့ ဒုတိယအသင်းတွေကို အသီးသီးကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ ၂ ထပ်ကွမ်း TI ချန်ပီယံ OG ရဲ့ ဒုတိယအသင်း OG.Seed ကတော့ အောင်မြင်မှု အတော်အသင့် ရရှိနေပါပြီ။ Virtus.Pro (VP) ရဲ့ ဒုတိယအသင်းကိုတော့ VP.Prodigy လို့အမည်ပေးထားပါတယ်။ ပါဝင်တဲ့လူစာရင်းကတော့ 1. epileptick1d 2. fn (Stand-in) 3. DM 4. Save- …
ဒုတိယအသင်းတွေ ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ Virtus Pro နဲ့ Dendi ရဲ့ B8 Read More »
[Unicode] အသင်းသစ်ရှာတွေ့သွားတဲ့ Dendi Dota2 ပရိသတ်တွေရဲ့ လူချစ်လူခင်အများဆုံး Legend တစ်ယောက်လို့ဆိုရမယ့် ယူကရိန်းနိုင်ငံသား Dota2 ကစားသမား Danil “Dendi” Ishutin ဟာ အသင်းသစ်ကို ရှာတွေ့သွားပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အသင်းလက်မဲ့ ဖြစ်နေတာ အတော်ကြာနေခဲ့တဲ့ အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ် Mid ကစားသမား Dendi ဟာ သူအချိန်အတန်ကြာ ရှာဖွေနေတဲ့ အသင်းကိုတော့ ဖွဲ့စည်းလိုက်နိုင်ပါပြီ။ သူတို့ရဲ့ သတင်းကို စတင်ဖွင့်ဟခဲ့သူကတော့ နာမည်ကျော် Dota2 Caster “V1lat” ဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ Twitter မှာ ကြောညာခဲ့တာပါ။ အသင်းနာမည်ကတော့ “Viet Flashbacks” ဖြစ်ပြီး Commonwealth of Independent States (CIS) အခြေစိုက်အသင်းပဲ …
အသင်းသစ်ရှာတွေ့သွားတဲ့ Dendi Read More »
Dendi ဘယ္မွာ standin ကစားဦးမလဲ
[Zawgyi] “Dendi ဘယ္မွာ standin ကစားဦးမလဲ” ပရိသတ္အခ်စ္ေတာ္ ဝါရင့္ကစားသမားေဟာင္းၾကီး Dendi တစ္ေယာက္ကေတာ့ Aachen City Esports မွာ standin ဝင္ေရာက္ကစားမယ္လို႔ မၾကာေသးမီက ေၾကညာလိုက္ပါျပီ။ မၾကာမီက်င္းပေတာ့မယ့္ WePlay! Reshuffle Madness start today ျပိဳင္ပြဲရဲ႕ open qualifier ပြဲစဥ္မ်ားမွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မယ့္ Dendi နဲ႔ သူ႔ရဲ႕အသင္းမွာ LeBronDota, Mitch, EcNart နဲ႕ V-Tune တုိ့ ပါဝင္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ Dendi ဟာ ဒီျပိဳင္ပြဲအတြက္ LeBronDota ကို ကူညီကစားေပးခ်င္လို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ LeBronDota ဟာ Na’Vi မွာ Dendi နဲ႔အတူ လအတန္ၾကာ ကစားဖူးတဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္သလို …
Dendi ဘယ္မွာ standin ကစားဦးမလဲ Read More »
Pro Player ေတြအျပင္ Dota2 ရဲ႕ လူခ်စ္လူခင္ အမ်ားဆံုး ကစားသမားတစ္ဦးပါဝင္လာတဲ့ TI9 ရဲ႕ ပြဲေၾကညာသူ စာရင္း
[Zawgyi] Pro Player ေတြအျပင္ Dota2 ရဲ႕ လူခ်စ္လူခင္ အမ်ားဆံုး ကစားသမားတစ္ဦးပါဝင္လာတဲ့ TI9 ရဲ႕ ပြဲေၾကညာသူ စာရင္း ဒီႏွစ္ The International 2019 Dota2 ၿပိဳင္ပြဲကေတာ့ ကမာၻ႔စံခိ်န္တင္ ဆုေၾကး ေဒၚလာ ၃၂ သန္းေက်ာ္နဲ႔ မၾကာခင္ စတင္ေတာ့မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ August 15 မွာ Group stage စတင္မယ့္ ဒီၿပိဳင္ပြဲကေတာ့ ပြဲနားနီးေလ စိတ္႐ွဳပ္ရွားစရာေတြပိုၿပီး ျဖစ္ေပၚေလပါပဲ။ ၿပိဳင္ပြဲမစခင္ တစ္ပါတ္အလို ယေန႔မွာေတာ့ Valve ဟာ ပြဲစီစဥ္တင္ဆက္သူနဲ႔ ပြဲေၾကညာသူစာရင္းကို ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ပြဲအစီအစဥ္မႈး (Host) စာရင္းမွာေတာ့ TI ရဲ႕ မပါမျဖစ္ Legend ၂ ဦးျဖစ္တဲ့ …
Pro Player ေတြအျပင္ Dota2 ရဲ႕ လူခ်စ္လူခင္ အမ်ားဆံုး ကစားသမားတစ္ဦးပါဝင္လာတဲ့ TI9 ရဲ႕ ပြဲေၾကညာသူ စာရင္း Read More »